Mijanona amin'ny vidin'ny Apple Care + iMac ho an'ny iMac Pro ihany Avy amin'ny mac aho
Ireo mpampiasa mila ary nanapa-kevitra ny hividy ny iMac Pro, na dia lafo aza ny vidin'ity milina Apple mahery ity, saingy tokony ho takatra amin'ny fampiasam-bola izy ireo, ho hitan'izy ireo ny fomba hahazoana antoka fa tsy lafo loatra ny iMac Por miaraka amin'ny Apple Care + araka ny mety ho izy. Azo hamarinina amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fividianana iMac Pro avy amin'ny pejy Apple izany ny vidin'ny Apple Care + dia mijanona amin'ny € 179, ny vidiny mitovy amin'ny iMac ankehitriny. Ankasitrahana ity fanitsiana ity, satria aorian'ny fandaniany € 5,499 amin'ity milina ity, farafaharatsiny misy ny lesoka amin'ny sarany mirary.
Iza no tsy mahalala an'ity serivisy Apple ity, lazao izany ny tombony lehibe dia ny fanitarana ny fiantohana ny iMac Pro amin'ny taona fahatelo. Saingy tsy mijanona eo izany: hatramin'ny nialàn'ny serivisy dia manana isika 90 andro ny serivisy an-tariby. Mandritra izany fotoana izany, manolotra antsika ny tahan'ny mikatona amin'ny fanamboarana sasany, amin'ny vidiny mirary kokoa mifandraika amin'ny mpanjifa tsy misy ity serivisy nifanarahana ity.
Farany, serivisy tsy dia fantatra loatra dia izay Apple Care + dia tsy mila vidiana rehefa mividy ny fitaovana, raha tsy izany dia manana hatramin'ny herintaona isika hanakarama azy.
Ankoatr'izay, na dia tonga tany Etazonia aza ny vaovao lazainay aminao, dia azo atao ny manamarina farafaharatsiny any amin'ny firenena maro fa io hetsika io dia narahina tsirairay avy. Ny tsy fantatra dia ny hoe mikasa ny hanova ireo vidiny na fandrakofana ireo ve i Apple amin'ny herinandro ho avy.
Noho izany, amin'ny vidiny anananao amin'izao fotoana izao, raha ampitahaina amin'ny vidin'ny fitaovana rehetra, Izy io dia singa iray izay tsy tokony hanjavona amin'ny "kitapo" ananantsika rehefa mividy ny iMac Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Store » Mijanona amin'ny vidin'ny Apple Care + an'ny iMac ho an'ny iMac Pro
Ny patanty vaovao dia afaka manampy an'i Siri hanahaka ny feon'ny feontsika manokana